Hogaaminta cusub ee jaaliyada DDSI ee fadhigeedu yahay Finland oo shir muhiim ah layeeshay masuuliyiinta safaarada DFI ee fadhigeedu yahay Stockholm hormuudna ay u ahayd H.E Abassador Woinishet Tadese kuna wahilinayay Qunsul Xuseen Axmed. |
Hogaaminta cusub ee jaaliyada DDSI ee fadhigeedu yahay Finland oo shir muhiim ah layeeshay masuuliyiinta safaarada DFI ee fadhigeedu yahay Stockholm hormuudna ay u ahayd H.E Abassador Woinishet Tadese kuna wahilinayay Qunsul Xuseen Axmed.
Finland (estvlive) 08/03/2014
Sida ay Qunsuliyada DFI ee Sweden noo soo Gudbisay waxaa Shiray Jaaliyada Finland iyo Safaarada DFI ayaa waxaa si qotedheer loogu falanqeeyay kulankan xaalada guud ee uu dalku marayo iyo horumarka dhinackastaba ee uu dalku ku taalaabsaday kobaca dhaqaale ee wadankuna uu gaaray double-digit kadib dadaaladii wax ku oolka ahaa ee ay dawladu ku talaabsatay.
Waxaa sidoo kale ay xubnaha kulankan ka qaybgalay ay si balaadhan ugu qaadaa dhigeen horumarka iyo nabadgaliyada taabo galka ee ay DDSI ku talaabsatay mudadii yarayd ee uu majaraha u hayay M/weyne CMC tusaale fiicana ay u tahay sidii shirweynihii Xuska Qawmiyadaha itoobiya loogu xusay Jigjiga guud ahaan shacabweynaha itoobiya iyo inta danaysa itoobiyaba ay kamarag kaceen in runtii loo qanqaabiyay si aan abid horey loogu xusin maalintan qadarinta iyo qiimaha badan. Shirkan oo farxad iyo raynrayn kusoo dhamaaday waxaa kasoo baxay qodobadan hoos ku qoran.
1. Jaaliyada Finland oo balanqaaday inay hiil iyo hooba lagarab taaganyihiin nidaamka dimuqraadiyadeed iyo maamulka suuban ee kana qaaday itoobiya gaar ahaan DDSI.
2. Ka qaybgalka horumarinta wadankooda iyo sidii ay jaaliyadu uga gaysanlahay talaabooyin wax ku oola maalgashiga DDSI.
3. Adkaynta wadashaqaynta Jaaliyada iyo Safaarada DFI iyo Deegaankaba.
4. Diyaarinta kulamo balaadhan oo lasgu wacyi galinayo xubnaha Qurbajoogta ah ee kasoo jeeda DDSI.